Flat Lock စက်အစိတ်အပိုင်းများ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -sewingmachineaccessories.com.tw
Hongcheng Precision Industry Co., Ltd. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ Flat Lock စက်အစိတ်အပိုင်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တာရှည်ခံအရည်အသွေးမြင့်မားကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ပြီးမတူကွဲပြားသောဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်တွေလည်းရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့အရွယ်အစားနှင့်ဖောက်သည် '' အတိအကျလိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်စိတ်ကြိုက်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ gradations နှင့်အတူထိုထုတ်ကုန်ပေးစွမ်းပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အနှံ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုပြန့်ပွားခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာ availed နိုင်ပါသည်။
ပုံစံ - 4301301-01-00 / 4301302-01-00
Yamato မော်ဒယ် VT1500 အပိုပစ္စည်းများ
ဒီအပိုပစ္စည်းနှစ်ခုဟာ Yamato ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာထောက်ပံ့ခဲ့တယ်.ထိုဓားများကိုထုတ်လုပ်ရန် HSS ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည်.ဒီပါးလွှာသောအထည်ထုတ်ကုန်အဘို့ဖြစ်၏.ကျနော်တို့ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အတူကထုတ်လုပ်ရန်.တိကျမှုသည်အလွန်မြင့်မားသည်.ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဓားအတွက်ဗန်းဖြူသံမဏိထုတ်လုပ်မှုလည်းရှိသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sewingmachineaccessories.com.tw/my/flat-lock-machine-parts.html
Flat Lock စက်အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူနှင့် Flat Lock စက်အစိတ်အပိုင်းများ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ -ကျော် 76,565 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ sewingmachineaccessories.com.tw